IOS 13 malaha waa kuu diyaar hadda | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/IOS 13 malaha waa kuu diyaar hadda
IOS 13 malaha waa kuu diyaar hadda
Ka dib markii la sii daayay iOS 13.1 beta 2, iOS 13 waxay u badan tahay inay kugu filan tahay inaad rakibto oo aad isticmaasho. Waxaan iPadOS-ka cusub ku shaqaynayay iPad-kii tijaabadii hore ilaa iyo nuqulkii ugu horreeyay, wuuna dhalaalayay. Laakiin marka la eego horumariyaha beta ee ugu dambeeyay, ku dhawaad ​​dhammaan dhibaatooyinka waa laga saaray.
Marka, macruufka 13 beta runtii ma xasiloon yahay si loo rakibo?
Iska jir - abkaagu wali wuu jabi karaa
Iyadoo iOS 13 beta lafteedu ay diyaar u tahay isticmaalka maalinlaha ah, wax la mid ah lagama odhan karo abkaaga. Waxaan tijaabinayaa muggeed oo abka ah oo la cusboonaysiiyay si ay si sax ah ugu shaqeeyaan iOS 13, laakiin wax kasta oo kale oo iPad-kayga ah weli lama hagaajin. Tani waxay ka dhigan tahay inaanan iPadOS 'daaqadaha badan ee cusub u isticmaali karin wax aan ahayn abka Apple.
Waxayna sidoo kale ka dhigan tahay in mid ka mid ah barnaamijyadaas uu ku guuldareysan karo inuu bilaabo, ama xitaa lumiyo xogta. Hubi laba jeer in abkaaga muhiimka ahi ay ku shaqeeyaan iOS 13 ka hor inta aanad rakibin beta. Ama weli ka sii wanaagsan, sug ilaa wax yar ka dib bilaabista rasmiga ah si aad u noqoto mid badbaado leh.
Laakiin dabcan, ma yeeli doontid taas.
Hagaajinta kama dambaysta ah ee iOS 13 beta
IOS 13 ee cusub ee Safari
Hagaajinta ugu muhiimsan ee iOS 13 ayaa ah in Apple ay ka quusatay ku darista astaamaha cusub ee iCloud Drive, oo ay dib ugu noqotay noocii hore, xasilloon ee iCloud Drive. Taas macnaheedu waa in aanay jirin faylal la wadaago iCloud, hadda, laakiin sidoo kale waxay la macno tahay inaadan lumin doonin xogta, ama arki doonin faylal nuqul ah, ama aad ku dhibtoonayso kuwa ugu cadcad nuqulladan ee dhinaca bar-side. iCloud Drive hadda waa inuu ahaadaa mid badbaado leh sida uu ugu jiro iOS 12.
Apple sidoo kale waxay hagaajisay cillado kala duwan oo is-dhexgal isticmaale ah. Isticmaalka jiirka, tusaale ahaan, hadda kama qaboojiso shaashadda si loo taabto. Sidoo kale, safka wadaagga degdega ah ee cusub ee cajiibka ah ee ku jira xaashida wadaaga ee iOS 13 - kaas oo kuu ogolaanaya inaad la wadaagto meelaha la wadaago iyo dadka leh hal taabasho - hadda ma muuqo. Ka hadalka walxaha UI ee huwan, Kaarka-dooriyaha Slide Over-ka hadda ma muuqo.
Cadhada kale ayaa sidoo kale laga waayay iOS 13 betas kii ugu dambeeyay. Tusaale ahaan, kiiboodhka shaashadda inta badan wuu ku guuldareystaa inuu soo baxo marka Bluetooth uu shidmay, xitaa haddii aadan lahayn kiiboodhka Bluetooth-ka oo ku xiran. Taasi waa go'an. Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa furaha gaaban ee kiiboodhka si aad u bedesho apps (⌘-Tab) mar kale. Betaskii hore ee beddelka abka waxa uu ku guul daraystay in uu soo baxo marka aad ku dhufo furaha kiiboodhka. Tani wali way dhacdaa, laakiin si ka yar marar badan.
Tilmaamo cusub ayaa ku soo noqday iOS 13.1 beta
Tusaalaha otomaatiga cusub ee Shortcuts.
Waxa kale ee weyn ee ku saabsan macruufka 13.1 beta waa in ay dib ugu soo celisay qaar ka mid ah astaamaha Apple ay ka saartay macruufka hore ee 13.0 betas. Tusaale ahaan, otomaatigyada Shortcuts ayaa soo noqday. Waa yaab. Waxaad samayn kartaa jid-gaaban oo ku saleysan waqtiga maalinta, goobtaada, ama xitaa adigoo ku dhejinaya iPhone-kaaga dhejiska RFID.
Waxa kale oo aad ku raaxaysan kartaa in aad ETA la wadaagto qof kasta oo aad u socoto inaad la kulanto, isticmaal midig-guji jiirka ku xidhan si aad u muujiso liiska macnaha guud, ama aad khibrada akhriska u leedahay hadafyada akhriska ee abka Buugaagta (sifada ugu liidata ee iOS 13, lacagtayda).
Markaa, haddii aad ku jirtay xayndaabka ku saabsan rakibidda iOS 13 beta, hadda waa wakhti fiican. Ama waxaad sugi kartaa wax yar ka dheer bilawga rasmiga ah, iyo in abka aad jeceshahay la cusboonaysiiyo. Laakiin haddii aad ku qanacsan tahay khatarta beta OS, markaa waa diyaar oo adiga ayay ku sugayaan.
Hal qoraal oo kama dambays ah: Kaliya waxaan ku tijaabiyay iPadOS beta iPad-kayga. Xitaa kama fikirin inaan ku tijaabiyo iPhone-kayga weli.
Soo-saar Buug: 'Saddexda Sirood ee Guusha Waarta ee Amazon'
21 Beddelka AdSense ee ugu Wanaagsan ee lagu Tixgelinayo Mareegtaada 2021